आखिर कसरी बाहिरियो राजेश हमाल दम्पत्तिको यस्तो भिडियो?(भिडियो हेर्नुहोस) – Enepali Samchar
March 18, 2021 adminLeaveaComment on आखिर कसरी बाहिरियो राजेश हमाल दम्पत्तिको यस्तो भिडियो?(भिडियो हेर्नुहोस)
E nepaalisamchaar/काठमाडौं- महानायक राजेश हमाल उमेरले आधा शताब्दी नाघिसकेका छन् । विवाहको सवालमा सधैँ चर्चामा आएका महानायक हमालले उमेर ढल्किएपछि मधुसँग विवाह गरे । अहिले भने कहिले बच्चा पाउने भनेर उनलाई धेरैले प्रश्न तेर्साउने गरेका छन् । उमेरले आधा शताब्दी नाघिसक्दा पनि महानायक हमाल आफूलाई सधै जवान ठान्छन् । कसैले अहिलेको उमेर सोध्यो भने भन्ने गर्छन्, ‘२५ वर्ष पुगेपछि गन्नै छोडिदिएँ ।’ सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा टिपटप भएर पुग्ने भएकाले उनको उमेर अनुमान गर्न पनि गाह्रै हुन्छ ।
बालुवाटार हिँडेका माधव-झलनाथ पक्षका सांसदले यस्तो खबर पाएपछि बाटैबाट फिर्ता
माधव नेपाललाई केपी ओलीको प्रस्‍ताव– निकै अप्ठ्यारोमा छु, मलाई सहयोग गर्नुहोस्